खाडी मुलुकमा महिला कामदार जान नपाउने | EuropeNepal.Net
00Europe Nepal Tuesday, September 2, 2014
Ban for the women to work in Golf Countries in Nepal,Gulf ban for female workers from Nepal
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सबै उमेरका महिलालाई रोजगारीका लागि खाडि मुलुक पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । उक्त प्रतिबन्ध असोज १ देखि लागु हुनेछ । श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले महिला कामदारमाथिको प्रतिबन्ध अस्थायी भएको बताए ।
'अस्थायी रुपमा खाडि मुलुकमा सबै उमेरका महिला कामदार पठाउन रोकेका हौं,' उनले भने, 'यस सम्बन्धमा नीति बनाइरहेका छौं । उक्त नीति बनिसकेपछि महिला कामदार कसरि पठाउने भन्ने नीतिगत ब्यबस्था हुन्छ । त्यसपछि महिला कामदार खुला गर्छौं ।'
The Ministry of Labour and Employment of women of all ages for employment, send parching country banned. The ban will be implemented from October 1. Minister of State for Labour and Employment of Women kamadaramathiko Bahadur Gurung said the ban was temporary.
"Women of all ages to send workers temporarily parching countries are obstructed," he said, "we are making policy in this regard. Women workers have been formed, how the policy is sent to the policy tightened. Then we open female workers. "
यसअघि घरेलु कामदार खुलाउन कुवेतमा एजेन्टसँग रकम असुली गरेको र राज्यमन्त्री गुरुङले 'मानव तस्करलाई फाइदा पुग्ने गरि घरेलु कामदारलाई अनुमति दिन कुवेतस्थित नेपाली दुतावासलाई मन्त्रालयको निर्णय पठाएको' समाचार प्रकाशित भएको थियो । त्यसलगत्तै श्रमले महिला कामदारलाई भीसा जारी नगर्न पत्राचार गरेको हो ।
खाडि मुलुकमा महिला घरेलु कामदारको ठूलो माग छ । त्यहाँका म्यानपावर ब्यबसायीले नेपालका म्यानपावर ब्यबसायीलाई घरेलु कामदार पठाए 'आर्थिक सहयोग' गर्नेसम्मको प्रस्ताव गरेका छन् । कुवेतस्थित नेपाली दुतावासमा घरेलु महिला कामदार खोल्न ब्यबसायीबाट जबजस्ती २ लाख रुपैयाँसम्म उठाएको उजुरी परेको छ ।
यसअघि श्रमले गत बैशाख ५ मा घरेलु महिला कामदार नपठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै दुतावासले घरेलु महिला कामदारको करारनामा र भिसा प्रमाणिकरण रोकेको थियो ।
ठूलो संख्यामा महिला कामदारको शारिरिक, मानसिक र आर्थिक शोषण भएपछि सरकारले २०६९ साउन २४ मा ३० वर्ष मुनिका महिला खाडि मुलुक नपठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि पनि मानव तस्करले भारतको बाटो हुदै ३० वर्ष मुनिका महिला कामदार अवैध रुपमा खाडि मुलुक पुर्‍याइरहेका छन् । 'भिसा जारी नभए महिला कामदार भारतको बाटो हुँदै अवैध रुपमा खाडि मुलुक जान पाउँदैनन्,' राज्यमन्त्री गुरुङले भने, 'त्यहि भएर भिसा जारी नगर्न आग्रह गरेका हौं ।' कान्तिपुर दैनिक मा खबर छ ।
EuropeNepal.Net: खाडी मुलुकमा महिला कामदार जान नपाउने